Ikhwalithi emihle yokupaka i-tile umbala wombala weplate wanikeza inani lomshini
South African Zulu Ikhwalithi emihle yokupaka i-tile umbala wombala weplate wanikeza inani lomshini
Umbala wombala we-tile umbala ophahleni lubukeka obuhle nombala ogqamile. Isetshenziswa kabanzi ensimini, efektri, ehhotela, ehotela, ehholo lokubukisa, eholidini, ezinqabeni zasendulo nasezindaweni zanamuhla.
Umshini wokwakha umshini wokugcoba umshini wokugcoba umbala womshini wokugcoba udayiswa kakhulu eRussia, kgyzstan, u-Uberkistan, i-Bolivia, i-America namazwe aqhoshayo. Bathanda ipuleti yombala yocwecwe elenziwe ngophahla lokugcoba indlu.
Ipayipi yombala we-tile evamile egqamile ngaphambi kokugubha i-coil ingu-1250mm, izinto ezisetshenziselwa ukugcizelela izinto zensimbi ze-PPGI zangaphambili.
Umshini ogcwele umbala womshini we-tile umbala womshini ohlanganisa umshini uhlanganisa i-decoiler, umshini wokwenza umshini, uhlelo lokulawula ikhompyutheni, i-puncher e-intanethi kanye ne-table out.